Xiisado colaadeed iyo cabsi dagaal oo laga soo sheegayo Deg Dhoobley – SBC
Xiisado colaadeed iyo cabsi dagaal oo laga soo sheegayo Deg Dhoobley
Posted by Webmaster on September 26, 2011 Comments
Wararka ka imanaya deegaano ku dhow dhow magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada hoose ayaa sheegaya in xaalada deegaankaasi ay tahay mid aad u kacasn oo laga dareemayo cabsi dagaal iyadoona dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan halkaasi.
Degmada Dhoobley oo ku taala xadka Somalia iyo Kenya ayaa beryihii ugu dambeeyay waxa ka jiray dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamo taabacsan DKMG ah ee Soomaaliya iyo ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Degmada Dhoobley ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay ku jirtay gacanta dowlada KMG ah ee Soomaaliya oo horay uga qabsaday halkaasi ciidamada xarakada alshabab inkastoo aysan sidaasi uga fogeyn halkaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad tii ugu balaarneyd oo aad u kacsan taas oo kasbi karta dagaal halkaasi ka qarxaa saacadaha soosocda.
Dhinaca kale waxaa iyana jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in saraakiisha ciidamada KMG ah ay dhaxdooda isku hayaan xaaladaha halkaasi ka jira iyagoo qaarkood sida wararka lagu helayo u talaabay dhanka Kenya.
Mid ka mid dadka deegaanka oo la hadlay Warqabadka SBC ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in ay siweyn uga cabsi qabaan dagaal dhaliya khasaare oo halkaasi ku dhexmara ciidamada DKMG ah iyo xoogaga Alshabaab .
Lama oga xaalku halka uu ku dambeyn doono waxaase laga warqabaa oo keliga xiisado iyo isku hub urursi u diyaar garow dagaal oo siweyn uga jirta deegaanka dhoobley iyo tuulooyinka ku xeeran.